PressRush: Ny sehatra fanaovana pirinty fahalalam-pomba ho an'ny fanentanana ny mpanao gazety | Martech Zone
PressRush: Ny sehatra fanaingoana fahalalam-pomba ho fanentanana ny mpanao gazety
Alakamisy, Desambra 31, 2015 Alatsinainy Janoary 21, 2019 Douglas Karr
Isan'andro aho dia mahazo kianja am-polony ao anaty boaty. Betsaka amin'izy ireo no tsy dia voasoratra firy, ny ankamaroany dia tsy misy ifandraisany amin'ny tranokalako, saingy misy volamena foana ao anaty antontam-spam PR noho izany dia mandinika aho. Nahazo kianja aho tamin'ity herinandro ity izay nisehoan'ilay mailaka somary hafa kely ary nanome traikefa tsara ho ahy.
Tiako ity fotoana ity hampahafantariko ny orinasam-pifandraisan'ny daholobe amin'ny faran'ny hafa ny maha-marina ny feony. Raha tiako ny pitch (izay eo ambanin'ny bokotra) dia mila mamaly fotsiny ny adiresy mailaka niaviany aho. Ny fomba mahafinaritra sy ny fomba fahalalam-pomba itovizan'ny matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe mba hahazoana antoka fa misy ifandraisany amin'ny influencer na bilaogera ampitainy.
Nandritra ny fotoana namaliako ny pitch manokana dia nojereko ihany koa ilay lampihazo nanoratana azy - Pressrush. Miaraka amin'ny Pressrush, azonao atao ny manangana fanairana momba ny lohahevitra, mamorona fefy, mpanentana amin'ny fikarohana ary mamorona lisitra manokana alefanao. Ary rehefa alefa ny ladinao dia ampiasain'izy ireo ilay fomba nolazaiko etsy ambony.
Mino mafy aho fa tsy ny fandefasana tohatra bebe kokoa no vahaolana. Ny vahaolana dia ny fananganana fifandraisana maharitra manomboka amin'ny fanentanana manokana, voadinika tsara, kendrena be ary misy fanondroana ara-potoana marina. Miaraka amin'ny PressRush aho dia nanangana fitaovana hanampiana anao hanao izany .Ville Laurikari, mpanorina ny Pressrush.
Ny fananganana lisitra dia tsotra amin'ny fampiasana ny motera fikarohana anatiny ho an'ny mpanao gazety. Ity misy valiny ho an'ny analytics sy ny refy, izay ahitanao ny tena anao:
Ary raha tsindrio ny mombamomba ahy, dia azonao atao ny mahazo ireo lahatsoratra farany navoakako miaraka amin'ny rohy mankamin'ny mombamomba ahy sy ny adiresy mailaka.
Ny satroka dia azo sivanina amin'ny taona, toerana ary famoahana. Izy ireo koa dia azo sokajiana amin'ny fitadiavana na ny fifandraisany. Raha vantany vao mandinika ny mpanao gazety tsirairay ianao, dia azonao atao ny manampy azy ireo ao anaty lisitra haino aman-jery manokana izay azo sintonina na alefa. Ny tsara indrindra, rehefa miova ny mombamomba ny fifandraisana, dia voatazona vaovao hatrany ny lisitrao.
Midira amin'ny fanandramana Pressrush
Tags: ny mpitoraka bilaogyfanaovan-gazetyfanentananamailaka fanentananafitadiavana ny fitorianapressrushVille Laurikari
Maninona ny 2016 no ho teboka manerantany ho an'ny toekarena finday